Sesiqala ukuba ngcono isimo kwaHino
ELINYE lamaloli elikhiqizwa eHino South Africa eProspecton, eThekwini
Intatheli Yazezimoto | June 20, 2022
UYA ngokukhula umthamo wamaloli akhiqizwa efemini yakwaHino South Africa eProspecton, eThekwini, ngemuva kokuphazamiseka ngenxa yezikhukhula ngo-Ephreli 11.
IHino, engaphansi kweToyota, yaphoqeleka ukuthi ivale ifemu izinsuku ezingu-40 yaze yabuyela kancane ngoMeyi 23.
Ishulu seHino SA, u-Ernie Trautmann, sithe lokhu kuwumphumela omuhle womsebenzi onzima owenziwe yithimba elizimisele.
“Lihlanganise nongoti abathathu baseHino Motors eJapan abanamava wokukhuculula nokubuyisela amafemu emsebenzini ngesikhathi kuhlasele itsunami eJapan,” kusho uTrautmann.
IHino ithe amaloli angu-78 nezinye izinsimbi okungakwazanga ukuhlengeka kuzocekelwa phansi ukuze kungangeni emakethe.
Iqhube yathi umonakalo omkhulu wadalwa ngamanzi aseShongweni Dam ngesikhathi livuleka. Ithe imisele ebikhona yakwazi ukumelana nemvula yokuqala futhi ikwazile nokumelana nezikhukhula ezihlasele ngoMeyi 21.
“Ukuhlanza udaka nezingcugcu zemishini ezindaweni ezahlukene zefemu kuwumsebeenzi othatha isikhathi futhi lapho kukhiqizwa khona izimoto ezincane zakwaToyota nama-light commercial vehicle (LCV) akukaqali.”
Babale iToyota efemeni yayo ikhiqiza izimoto okubalwa kuzo iCorolla Cross, Corolla Quest, Fortuner, Hilux neHiace Ses’fikile.
IHino ithe izinkampani esebenza nazo azithintekanga kodwa ezisebenza nefemu yezimoto ezincane namaLCV zaphazamiseka.
Le nkampani ithe yalahlekelwa wumkhiqizo wezimoto ezingu-550 kodwa inethemba kokuthi izokwazi ukuwubuyisa ngokuqhubeka konyaka.
Ithe ngemuva kwezikhukhula abasebenzi bayo abalinganiselwa ku-100 babesemakhaya kodwa ngemuva kwamasonto babuya kancane kancane ukulekelela ukuhlanza ifemu.
“Kuseqhulwini lethimba lethu nokumaketha ukwazisa amakhasimende ethu ngokuqhubekayo nokuthi asebefake ama-oda bangalindela nini ukuwathola. Sibone ukuthi amakhasimende ethu ayasiqonda isimo esibhekene naso futhi sisebenza ngokushesha ukuze sithumele masinyane,” kusho uTrautmann.